Wararkii ugu dambeeyay Xiisadii ka dhalatay Xil ka qaadistii Dabageed
Baladweyne (Horumar Online) – Wararka caawa naga soo gaaraya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ayaa sheegaya, in qaar ka mid ah waxgaradka magaalada ay bilaabeen dadaallo ay ku doonayaan soo afjaridda xiisadda ka aloolsan gobolka.
Xiisaddan ayaa markii hore ka dhalatay, xil ka qaadistii lagu sameeyay guddoomiyaha gobolka Hiiraan, Yuusuf Dabageed.
Wararka ay heleyso Horumar.net, ayaa sheegaya in qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne ay la kulmeen guddoomiyihii xilka laga qaaday, iyagoona ka codsadeen in uu si nabad ah xilka ku wareejiyo, uuna isaga baxo gebi ahaan gobolka, balse waa uu ku gacan seeray.
Waxaa lagu wadaa in magaalada Baladweyne ay gaaraan xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, si ay uga hor tagaan in uu dagaal uu isku badalo xil ka qaadistii lagu sameeyay guddoomiyihii gobolka Hiiraan.
Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya, in madaxweynaha Hirshabeella uu amar xoog looga saaro xarunta gobolka, lana soo xiro guddoomiyihii xilka laga qaaday.
Si kastaba, Guddoomiyihii xilka laga qaaday, Yuusuf Dabageed, ayaa sheegay isaga oo ay garab taagan yihiin ciidamo badan oo taageersan, in uu iska difaaci doono cid kasta oo isku dayda in ay xirto.
Tags: #Baladweyne #Dagaal #Guddoomiye #Xiisad #Yuusuf Dabageed
Previous Post Somali PM Khaire meets with UK delegation in Mogadishu
Next Post AU Special Representative Engages With Somalia’s Speaker Of Parliament